Mahazoa mari-pahaizana mpandray anjara avy amin'ny iPad / iPhone - Geofumadas
GPS / Fitaovana
Febroary, 2015 GPS / Fitaovana, Pirinty voalohany
Ny mpandray GPS an'ny fitaovana iOS, toy ny iPad na iPhone, dia mahazo ny fahamendrehana amin'ny filaharan'ny browser hafa: eo anelanelan'ny 2 sy 3 metatra. Ankoatra ny GIS Kit, vitsy hafa izay azontsika natao mba hanatsara ny fahamarinany, na izany aza, noho ny fanadihadiana ny namana iray, dia toa mahaliana ny mijery ity kilalao ity fa tsy toy ny Posify Ity dia mifandray amin'ny fitaovana finday.
Na eo aza ny fahitana azy amin'ny fitaovana tsotra, ny Bad Elf GNSS Surveyor dia mpandray vaovao sy matanjaka izay, amin'ny alàlan'ny Bluetooth, dia manome safidy finday ho lasa mpandray GNSS, ao anatin'izany ny sensor barometrika hahazoana haavon'ny haabon'ny ranomasina. Amin'ny sidina dia miasa toy ny browser izy io, saingy amin'ny mavitrika tsy mihetsika dia afaka mahatratra ny mari-pahaizana ambany metatra amin'ny alàlan'ny SBASS, miaraka amin'ny fanohanana fanodinana aorian'ny fanodinana (DGPS) mahatratra 10 eo amin'ny 50 sentimetatra.
Azo ampiasaina amin'ny fitaovana 5 miaraka amin'ny Bluetoot.
Fa ny vidiny no tena naka fanahy, satria toa mahaliana hafa azo ekena ho an'ny manainga amin'ny fametrahana mazava tsara amin'ny vidiny ambany dia ambany.
Precision manolotra ny mpandinika ny Bad Elf GNSS
Toro-làlana fisoratana mazava tsara (PPP): ho an'ny fampiharana static miaraka amin'ny fahitana tsara. PPP dia mampiasa signal phase operator mba hampihenana ny fanodikodinam-pahefana ionosfera sy ny fambara maromaro. Izany dia manome fahamarinana iray metatra nefa tsy mila miresaka amin'ireo gara eo an-toerana na loharano fanitsiana hafa.
Sampam-pitsaboana (SPM) (SBAS): Amin'ny alàlan'ny antokon-kintana iray, ny SBAS dia manome fanitsiana data ho an'ny olan'ny orbit, ny famantaranandro ary ny toetr'andro na ny toby fitsangatsanganana an-tany. Ny fandrakofana dia misy an'i Amerika Avaratra (WAAS), Japan (MSAS), Europe (EGNOS), ary India (GAGAN). Ny SBAS irery dia misy ny toeran'ny marindrano miaraka amina 2 hatramin'ny 2.5 metatra.
GPS Differential Correction (D-GPS): Ny fanitsiana dia azo alaina amin'ny alàlan'ny toeram-piantsonana na aiza na aiza manerana an'izao tontolo izao, ny tontolo GNSS dia manohana ny fenitry industry industry RTCM 2.3 mba hiasana amin'ny maha-rover D-GPS.
Raw data momba ny angona nomena ho an'ny RTK: Ho an'ny fampiasana izay ilaina ny fahamendrehana tsara kokoa (10 ka hatramin'ny 50 centimetatra), ny angon-drakitra sy ny fandrefesana SBAS dia azo ampiasaina amin'ny fampiharana aorian'ny fanodinana sy ny fotoana tena kinematika (RTK). Ity data ity dia azo alaina amin'ny alàlan'ny SDK sy fisie rakitra voatahiry ao anaty maody irery.
The Bad Elf GNSS Surveyor koa dia afaka manome data GPS amin'ny maody mivantana NMEA amin'ny alàlan'ny Bluetooth na USB ho an'ny fitaovana tsy iOS, toy ny finday mandeha amin'ny Android, Windows, Mac OS X na Linux. Na dia amin'izao fotoana izao aza ny fanohanana ireo sehatra ireo dia voafetra.
Ny tabilao manaraka dia mampiseho ny fomba tany am-piandohana ny antontan'isa dia azo refy teboka telo metatra, roa metatra midina, tena azo ekena submeter refy eo anatrehan'i efatra minitra.
GPS Fahazoan-dàlana GFSS.
Ny GNSS dia latsaky ny iray metatra mijanona, mamafa ny SBASS + PPP.
Famaritana 10 ka hatramin'ny 50 cm amin'ny alàlan'ny fampiharana fanodinana aorian'ny fanodinana. Amin'ny ho avy dia mampanantena SDK izy ireo amin'ny fampandrosoana ny antoko fahatelo.
Mampiofana ny fanodikodinam-panafody (DGPS), amin'ny fampiasana ny fanitsiana RTCM amin'ny tamba-jotran-tserasera.
Fandraisana ny serasera 56 GPS, GLONASS sy QZSS miaraka amin'ny SBASS (WAAS / EGNOS / MSAS)
Ao anatin'ilay hetsika dia manome GPS an'ny metodin'ny 2.5 metatra.
Ny tahan'ny rindrambaiko natsangana tamin'ny 10 Hz.
Hamarino ny tarehimarika hita maso, GPS + GLONASS amin'ny efijery mazava ny LCD.
Fiainana bateria, hatramin'ny 35 ora. Na dia manohana hatramin'ny 200 ora aza tsy misy fomba fandraisana.
Azo jerena amin'ny PC amin'ny alalan'ny USB cable izany, toy ny penina drive.
Safidy hampifandray amin'ny fomba mandeha amin'ny PC na Mac.
Ahitana barometer ho an'ny haavo.
Manomboka haingana dia haingana toy ny iray segondra, miaraka amin'ny fandraisana zanabolana tsy miankina amin'ny tilikambo finday. (Tsy mila internet hahazoana fidirana GPS).
Azo ampiasaina hatramin'ny 18,000 metatra ambony indrindra, raha sendra misy fiaramanidina, ary haingana hatramin'ny 1,600 kilometatra isan'ora.
Miasa irery ilay fitaovana, manatsara ny maha-marina ny fandraisana azy saika amin'ny fampiharana iOS rehetra, saingy mitaky fampidirana amin'ny alàlan'ny Bad Elf SDK hiditra amin'ireo endri-javatra mandroso. Amin'izao fotoana izao dia efa manomboka miasa am-pahavitrihana amin'ireo mpamorona rindrambaiko tohanan'ny GNSS ireo mpanamboatra azy.
Rehefa mividy ny fitaovana dia ahitàna:
BE-GPS-3300 GNSS fisintonana fitaovana.
90cm USB cable ho an'ny famenoana herinaratra.
Fiantohana fiara 12-24 volts.
Azo ampiasaina amin'ny fitaovana iPod, iPad ary iPhone:
iPod dia manendry ny fahadimy amin'ny taranaka.
iPhone 5S, 5C, 5, 4S, iPhone 4, 3GS iPhone, ary iPhone 3G.
iPad Air, iPad (Fahatelo sy fahefatra), iPad 2, iPad.
iPad mini miaraka amin'ny Retina display, iPad mini.
Ny vidin'ny fampiroboroboana dia amin'ny dollar 499.
Tsy ratsy, raha ampitahaina amin'ny ekipa mitovy marika amin'ny marika malaza dia mihoatra ny $ 1,900 - na mihoatra. Ny sasany amin'ireo tsara indrindra hitako tamin'ny vahaolana amin'ny famotopotorana marina, na dia tsy maintsy hosedraina aza izy io mba hahazoana antoka fa misy dikany amin'ny fividianana betsaka ho an'ny tetikasa lehibe.
Afaka mahita fanazavana bebe kokoa ianao eto.
Previous Post«Previous Maka sary amin'ny Manager for Bricscad
Next Post Geomarketing vs. Tsiambaratelo: Ny fiantraikan'ny geolocation amin'ny mpampiasa iraisanamanaraka »
3 mamaly ny "Mahazoa ny fahamarinana ao amin'ny iPad"
Dan Ericson hoy izy:
Jag är skrivere av Skriftleid Bad Elf GPS forgående dig i skal ställen på å gjøre til lærer fra noggrant som möjligt
Aiza no ahitako azy any Meksiko?
jaime jarquin hoy izy:
Tena lafo be noho ny fehezan-dalàna kely azony